आजसम्मकै सबैभन्दा बढी एकैदिन ९ हजार ८४१ जनाले जिते को’रोना ! – Sandesh Press
आजसम्मकै सबैभन्दा बढी एकैदिन ९ हजार ८४१ जनाले जिते को’रोना !
May 29, 2021 461
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा झण्डै १० हजार जना को’रोना मुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज ९ हजार ८४१ जनाले कोरोना जितेका छन्। यो संख्या नयाँ सं’क्रमित भन्दा संख्या नयाँ सं’क्रमित भन्दा २९ सय ८६ ले बढी हो । योसँगै सं’क्रमण मुक्त हुनेको संख्या ४ लाख २८ हजार ६७० पुगेको छ ।
अहिले सम्म नेपालमा ५ लाख ४९ हजार १११ जनालाई सं’क्रमण पुष्टि भएको छ भने ७ हजार ४७ जनाको मृ,त्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा देश भर ६ हजार ८५५ जनालाई सं’क्रमण पुष्टि भएको छ भने ९६ सं’क्रमितको मृ,त्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका प्रयोगशालाहरुमा गरी १९ हजार ३१३ जनाको आरटी–पीसीआर विधिबाट नमूना परी क्षण गरिएको थियो ।
आरटी–पीसी आर विधिबाट गरिएको परीक्षणका क्रममा ६ हजार ८५५ जनामा सं’क्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै, सोही अवधिमा ७९७ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा ९६ जनामा को’रोना सं’क्रमणको संकेत (एन्टिजेन पोजेटिभ) देखिएको हो। अहिले १ लाख १३ हजार ३९४ जना सं’क्रमित आइसोलेसनमा छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा २ हजार ३ सय २४ जनामा को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा १ हजार ७ सय ९६ जना, भक्तपुरमा २१३ जना र ललितपुरमा ३१५ जना को’रोना सं’क्रमित भेटिएका छन् ।फाईल तस्बिर
Prevबिहेमा साथीले भोलाको माला र दुध-दानी चुसाइदिएको भिडियो भाइ’रल (भिडियो हेर्नुस्)
Nextसाबधान ! को’रोना संक्रमण भएका मानिसले यी खानेकुराहरु भुलेर पनि नखानुहाेस् ! २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस
पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, पुस १३ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल